Thursday April 06, 2017 - 20:06:10 in Wararka by Super Admin
Qeybtan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa Sawirro lagasoo qaaday difaacyadii ciidamada Itoobiya ku lahaayeen magaalada Ceelbuur, itoobiyaanka ayaa magaalada ka degan dhanka galbeed waxay difaacyo waaweyn ka dhisteen dhul dherirkiisa lagu qiyaasay 5 KM isku weer ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa jiingado iyo agabyo kale oo ay ka bililiqeysteen gudaha Ceelbuur waxay ku dhisteen difaacyo iyo saldhigyo, sida muuqata Itoobiyaanka ayaa ka Baqdin qabay weeraro xooggan oo uga yimaad Xarakada Al Shabaab.
Sawirrada lagasoo qaaday magaalada Ceelbuur waxaa lagu arkayaa Raashin ay dowlada Turkiga ugu deeqday melleteriga Itoobiya ee magaalada xoogga ku heystay sedaxdii sanadood ee lasoo dhaafay, Dowladda Turkiga waxay sheegan jirtay in ay usoo gurmatay shacabka Soomaaliyeed balse raashinkii caalamka loo sheegay in soomaalida lasiinayo ayaa lagu nafaqeynayay soo duulayaasha Itoobiya.
Tani waxay marag ma doonto ka dhigeysaa in dowladda Turkiga ay dhanka saadka ay ka taageeysayo soo duulayaasha Itoobiya halka AMISOM ay ka taageerto dhanka dhaqaalaha iyo mushaar bixinta.
Saldhigyadii ay ka carareen ciidamada Itoobiya waxaa lagusoo arkay raashin iyo cunto Turki ah.
Halkan Ka Daawo Sawirada Difaacyadii Xabashida Itoobiya Ee Magaalada Ceelbuur.